China fiberglass emulsion e ingilazi glass fiber mat 450 ifektri kanye nabaphakeli | Yuniu
Isisindo esijwayelekile (g / m2)
Ukulahlekelwa ukuthungela (%)
1. Uniform ukushuba, ukuthamba nobulukhuni okuhle.
2. Ukuhambisana okuhle ne-resin, okulula ngokuphelele ukuphuma.
3. Isivinini sokumanzana esisheshayo futhi esingaguquguquki kuma-resins nokwenza okuhle.
4. Izakhiwo ezinhle zomshini, ukusika okulula.
5. Isembozo esihle sekhava, esifanele ukumodela ubujamo obuyinkimbinkimbi.
Iroli elilodwa ku-polybag eyodwa, bese umqulu owodwa kwikaroni elilodwa, bese upakisha ipallet, i-35kg / iroli isisindo esijwayelekile somqulu owodwa.
Q1: Yini esincintisana nabo ekhaya naphesheya? Uma kuqhathaniswa nabo, yiziphi izinzuzo nezinkinga zakho?
I-China Jushi, i-fiberglass yaseTaishan, iSichuan Weibo, i-CNBM, i-Owens Corning
Q2: Yiziphi izindawo zemakethe ozihlanganisa kakhulu?
Q3: Ziyini iziteshi zakho zokuthuthukisa amakhasimende?
Umbukiso Wamazwe Omhlaba, ukukhushulwa kweGoogle, Alibaba, madeinchina, SNS, njll
I-Q4: Unawo umkhiqizo wakho?
Yuniu ingilazi fibre
Q5: Ingabe uya embukisweni? Yimiphi imininingwane?
I-Q6: Yimaphi amathuluzi wokuxhumana online onawo?
Langaphambilini I-1200Tex 2400Tex i-Fiberglass eqondile isuka eChina
Olandelayo: Ukushisa okumelana ne-Glass fiber nokwelukiweyo ngekhwalithi ephezulu